Umhla My Pet » Ezintlanu Ubudenge Online Dating Yabucala ukuphepha
ukubuyekezwa: Nov. 26 2020 | 2 min ukufunda
Xa kuziwa ukuthandana online, iprofayile yakho ukuthandana kakhulu. Kufuneka uqinisekise ukuba nawe kuquka yonke inkcukacha ebalulekileyo ngokwakho kodwa nani ufuna ukugcina oko kunike umdla. Emveni kwakho konke, ukuba awufuni ndahlukile!
Nazi ezinye iingcebiso ukuphepha seposi kwiprofayile yakho ukuthandana online:
Imbi / zihluzwe Izithombe
Nantsi eyona nyaniso-kuqala koko ke yonke kwaye ukuba ifoto yakho iprofayile ngumfanekiso kuni shotgunning ibhiya okanye kukroba off lwecamera, ukuze shenxisa imihla ezinokwenzeka. Nokuba uchole ifoto ezifaneleke ngakumbi, azame ukuphepha iifoto ukuba kufiphale, ukuba kude kakhulu ukuba Akunakububona ubuso okanye bakho kunye nawe unxibe iindondo. Ifoto elula kuni encumile ngokwenene wemisebenzi ebalulekileyo.
Upelo rhoqo Igrama Iimpazamo
Asingabo bonke abantu ke pro igrama kunye nokuba ilungile ngokugqibeleleyo. nokuba, ukuba iprofayili yakho izele iimpazamo zopelo negrama, abantu izidlule ngokuthi iprofayile yakho ngaphandle ingcinga yesibini. Yenza itshekhi esisiseko mabophe ngokusebenzisa iprofayile yakho ukubamba naziphi na iimpazamo ezinkulu. Ndiya Ndingathanda Ungacebisa ukuba usebenzisa izifinyezo okubhaliweyo kwaye lingo (ezifana "eUre" endaweni "bakho" okanye "BC" endaweni "kuba") njengoko wakho ufuna iprofayile yakho ukuba icace ngqo kangangoko kunokwenzeka.
Zabavakalisa Like Wonke Omnye Umntu
Iitoni abantu abathanda ukufunda, hamba, Yiya kwimuvi, ukusebenzisa mayiphume isidlo. Ukuba uyawuthanda ngokwenene ngezinto ezithile, kwakubangathi, Sinaba ngakumbi nesizathu sokuba uyithande, apho kuye kwakho apho ufuna ukuya. Oku kukunceda ube starter incoko ukuba zinika inkcukacha ethe chatha. Unako kwakhona zama ukuthetha ngezinto ezininzi eyodwa ngawe. Hey, ukuba awusoze uyazi ukuba ngubani omnye umthande iiklasi zodongwe okanye spelunking!
Elele Malunga Small Iinkcukacha
Yinto Iyaqondakala ukuba ufuna ukubonisa iimpawu enu kwiprofayile yakho kodwa elele ngeenkcukacha zobuqu, nkqu nabancinane, kuyingozi. Ubuphosisa ubude wakho, ubunzima yakho okanye ubudala bakho ukuze ngathi usebenziswano omkhulu ekuqaleni, kodwa ukuba ekugqibeleni langutana umhla nawe wadibana online, ndibabhalele bamangaliswa kwaye uqale Ndiyamangala ukuba enye waxoka. Ukunyaniseka ku yeyona.
Ukuthetha Little kakhulu okanye Uyazibaxa Izinto
Akakho umntu ofuna ukufunda inoveli emfutshane xa ufunda yecala ukuthandana online. Xa profayili elide kakhulu, Abantu abaninzi badla bakuyeke kwaye nqakraza kwi iprofayile elilandelayo. Kukwanjalo ke ngenxa iprofayile zimfutshane gqitha. Makubekho iprofayili echaza wena kwizivakalisi elinye okanye amabini angakwenza khangela bengenamdla. Ukufumana eliphakathi egqibeleleyo phakathi ezimbini ngundoqo, ukuze ugcine iprofayile yakho eneenkcukacha kwaye utsole.